युरिक एसिड भन्या के हो त ? हुने कारण र बच्ने उपायहरु - DURBAR TIMES
HomeHealthयुरिक एसिड भन्या के हो त ? हुने कारण र बच्ने उपायहरु
युरिक एसिड भन्या के हो त ? हुने कारण र बच्ने उपायहरु
युरिक एसिड पहिलो पटक खुट्टाको बुढी औँला र त्यसको आसपासको जोर्नीहरुबाट दुख्न सुरु हुन्छ। यसलाई ‘मेटाटार्सल जोइन्ट’ भनिन्छ। प्रायः राति सुतेको बेला जोर्नीहरु अत्याधिक दुख्ने गर्छ र बिहान उठ्दा सुन्निएको हुन्छ। सुरुसुरुमा खुट्टाको बुढी औँलामा मात्र हुने दुखाइ समयमा उपचार नहुँदा अन्य ठूला जोर्नीहरुमा पनि सर्न थाल्छ।
Previous articleनेपाली नागरिकलाई मलेसियामा बन्धक बनाई रकम असुल गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ
Next articleलाेकसेवाकाे नक्कली परीक्षा सञ्चालन गर्ने पक्राउ